Sida loogu abuuro jawaabo deg deg ah taleefankeena gacanta | Androidsis
Dhamaanteen ayaa nagu dhacday in waqtiga ugu haboon ee aan helno wicitaan. Waqtigaas kama jawaabi karno, laakiin waxaan jeclaan lahayn in qofka na soo waca uu ogaado in aanaan uga jawaabi karin sabab, sidoo kale inaan ka hor istaagno inuu mar kale soo waco, wax xaaladaha badankood naga careysiiya. Marka lagu daro diidmada wicitaanka, on Android waxaan awood u leenahay inaan ku abuurno jawaabo deg deg ah, sidoo kale loo yaqaan jawaabaha otomaatiga ah.
Jawaab deg deg ah waa fariimo waxaa la soo saaraa markii aan na soo wacno mana ka jawaabi karno. Android waxay dadka siisaa awood ay ugu qaabeeyaan noocyada fariimaha qaab fudud. Marka marka qof soo waco, waad ogaan doontaa sababta aadan jawaab u helin.
Jawaabaha otomaatiga ah ee ku soo dhaca Android ayaa ku soo dhaca taleefannada oo dhan, kaliya looma shiddo markii hore. Caadi ahaan, waxaan helnaa xulashooyin taxane ah oo si iska caadi ah ku yimaadda, farriimo ay ka mid yihiin "mashquul baan ahay" ama "Waxaan ku jiraa kulan." Inkasta oo dadka isticmaala ay sidoo kale leeyihiin suurto gal ah in la abuuro fariimaha adiga kuu gaar ah si fudud. Marka shaqadan waa la habeyn karaa
Taleefanka Google wuxuu hagaajiyaa xannibaadda wicitaanka
Dareenkan, maahan inaan wax ku rakibno telefoonka. Waa shaqo aan helnay, dhammaan noocyada Android. Tallaabooyinka loo adeegsanayo waxay ku kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran qalabka iyo lakabka qaabeynta ee la isticmaalay. In kasta oo ay u muuqdaan kuwo aad isugu eg kiisaska oo dhan, taas oo ka dhigaysa iyaga mid aad u fudud.
1 Abuur jawaabo deg deg ah oo ku saabsan Android
2 Sida loo isticmaalo jawaabaha degdega ah
Abuur jawaabo deg deg ah oo ku saabsan Android
Waa inaan marka hore furnaa barnaamijka taleefanka, taas oo ah meesha suurtagalnimada soo saarista farriimaha otomaatigga ah sida caadiga ah laga helo taleefanka. Haddii aad isticmaasho barnaamij aan ahayn barnaamijka taleefanka Google, waxba ma dhacaan, waxaan sidoo kale ku yeelan doonnaa suurtagalnimadaas gudaheeda. Markaan ku dhex jirno arjiga, waa inaan furno goobaheeda. Xaaladaha qaarkood waa inaad gujisaa menu-ka, kuwa kalena astaanta leh saddexda dhibic.
Kadib dejinta gudaheeda waa lagama maarmaan hel qayb la yiraahdo Diido wicitaanada leh SMS, inkasta oo magacu ku kala duwanaan karo iyadoo kuxiran lakabka qaabeynta. Laakiin kani waa kan na xiiseynaya waqtigaas. Waa inay muujisaa inaan adeegsanno farriin si aan u diidno wicitaan soo socda, waa fikradda jawaabahan degdegga ah ee ku saabsan Android. Kadib waxaan galnaa qaybtaan.
Gudaha gudaheeda ayaan ka helaynaa farriimahan sida caadiga ah ku yimaada telefoonka. Android waxay na siisaa taxane ah jawaabo deg deg ah asal ahaan, oo aan u isticmaali karno waqti kasta haddii aan rabno. Sidaa darteed, haddii ay jirto farriin aan u aragno inay dan noo tahay, markaa waa inaan iska xulnaa oo keliya. Waxaa jiri kara dad doonaya inay iyagu ku abuurtaan taleefanka, tani sidoo kale waa macquul.
Telefoonada qaarkood, waxay bixisaa suurtagalnimada in wax laga beddelo farriimaha ku yimaada si aan caadi ahayn, u waafajinta qoraalka xaalad kasta. Moodooyinka kale waxay siiyaan dadka isticmaala ikhtiyaarka ah inay si toos ah u abuuraan farriimahooda. Si ay u helaan jawaab ku habboon maalinba maalinta ka dambaysa. Sikastaba xaalku ha ahaadee, markaan helno wax na daneynaya, oo aan dooranay, waan bixi karnaa.
Sida loo isticmaalo jawaabaha degdega ah
Waxaa jira dad adeegsadayaal ah oo isweydiinaya sida ay suurtagal ku tahay isticmaal isweydaarsiyadahan taleefanka. Xaqiiqdu waxay tahay markii aan qaabeynay farriinta nuucaan ah, waxa kaliya ee haray in la sameeyo waqtigaas waa inaan sugno wicitaan taleefanka ah.
Marka xigta ee aan ka helno telefoon ku saabsan Android, waa inaan eegno shaashadda taleefanka. Shaashadu waxay muujineysaa in qof uu na soo wacayo, oo leh magacooda (haddii ay ku jiraan dadka aan la xiriirno) iyo lambarka taleefanka. Waxaan awoodi doonnaa inaan aragno in ka koreeya badhanka wicitaanka diidmada, midka cas, waxaa jira astaan ​​fariin ah, sida midka ku jira barnaamijka farriimaha SMS-ka ee taleefankaaga ku jira. Waa inaan gujino astaantan.
Sida wax looga beddelo ringtone-ka xiriir ka socda Android
Sidaas, Jawaabaha degdega ah waxay ka muuqanayaan shaashadda taleefanka in aan adeegsan karno, kuwa aan ku soo koobnay qaybtii hore. Marka waa inaan kaliya dooranaa midka aan dooneyno inaan xilligaas adeegsanno. Marka sidaas la sameeyo, qofka na soo wacayay wuxuu helayaa fariin SMS ah oo fariinta la sheegay ay ku soo baxeyso. Tani waxay ku ogeysiineysaa in xilligan aan mashquul nahay, oo ay fiicantahay haddii aad mar dambe na soo wacdo, ama annagaa noqon doonna kuwa ku soo wici doona.
Sidan waxaan u adeegsan karnaa jawaabaha degdega ah android. Hab fudud oo aan ku diidi karno wicitaanada daqiiqado badan, gaar ahaan haddii aan rabno qof gaar ah inuu ogaado in xilligaas aan ka qayb geli karin iyaga iyo sababta. Waxaan u isticmaali karnaa iyaga markaan u aragno inay muhiim tahay ama ku habboon tahay adeegsiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo abuuro jawaabo deg deg ah oo ku saabsan Android
Sida loo helo Amazon Music Unlimited 3 bilood bilaash
Huawei waxay yareysey amarada wax soo saarka oo ay dib uga fakarto waxyaabo